सन् १९७० मा सुरु भएको नवउदारवादले नब्बेको दशकदेखि विश्व मानव समाजलाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेको छ । नवउदारवाद अर्थात् एक आर्थिक तथा राजनीतिक दर्शन जो समाजका सबै क्षेत्रमा बजार आधारित शासन, नियम र नियन्त्रणको पक्षमा हुन्छ । तर, नवउदारवादको यात्रा चुनौतीहीन भने छैन ।
उत्तर तथा दक्षिण– विश्वका दुबै ध्रुवमा नवउदारवाद विरुद्धको प्रतिरोध प्रखर छ । प्रारम्भिक प्रतिरोध सन् १९७७ को इजिप्टेली ‘रोटी विद्रोह’ र सन् १९८९ को भेनेजुएला विद्रोह थियो । सन् १९९४ मा मेक्सिकोको चियापासमा जापाटिष्टहरु आसन्न नाफ्टा विरुद्ध उठे । उत्तरमा ‘वैकल्पिक भूमण्डलीकरण’ आन्दोलन लोकप्रिय भयो । यस सन्दर्भमा सन् १९९९ को सियाटल प्रदर्शन उल्लेखनीय रह्यो । सन् २००१ मा वर्ल्ड सोसल फोरमले नउवदारवादको विकल्पमा सामाजिक अभियन्तालाई बहस, छलफल गर्ने मञ्च दियो । यस्ता जनपरिचालनले नवउदारवादले निम्त्याएको नग्न आर्थिक असमानता र वातावरणीय विनाशप्रति बलियो ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सन् २००८ को आर्थिक संकटले नवउदारवादलाई चुनौती दिन चाहनेहरुका लागि अनपेक्षित अवसर उपलब्ध गरायो । आन्दोलनका रुपमा अरब, युरोप र अमेरिकामा अकुपाई वालस्ट्रिट जस्ता ठूल्ठूला जनप्रदर्शन भए । यी आन्दोलनका बारेमा पर्याप्त लेखिए । विश्वव्यापी रुपमा चर्चा भए । विकल्प जरुरी छ भन्ने बोध गहीरो भयो । करिब ४ वर्ष यी आन्दोलनहरु निरन्तर चर्चामा रहे । तर आन्दोलनले सार्थक परिणाम दिने कुरामा आश्वस्त हुन सकिँदैनन्थ्यो । किनकी यी आन्दोलनमा केही भ्रम र वैचारिक कमजोरी विद्यमान थिए ।
मूलतः यस्ता आन्दोलनमा ‘हामी उत्तरवैचारिक युगमा बाँचिरहका छौं’ भन्ने गहीरो भ्रमपूर्ण सोच थियो । यो कमजोरीलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो । विचारधाराको अन्त्यको बहस एक धोकापूर्ण प्रवचन मात्र थियो । विचारको मुकाविला विचारले नै गर्न सकिन्छ । अवैचारिक ढंगले नवउदारवादसँग लड्न सम्भव थिएन/छैन । यस्ता आन्दोलनले ‘इतिहासको अन्त्य’ जस्ता पाखण्डबाट मुक्त भएर एक्काइसौं शताब्दीका लागि विचारधाराको पुनर्भाष्य गर्न जरुरी थियो । यसरी मात्र नवउदारवादसँग उसका प्रतिद्वन्द्वीहरुले बलियो सामना गर्न सक्नेछन ।
विचारधाराले नै परस्पर अन्तर्निभर तथा कार्याभिमुख प्रणालीका रुपमा सबै राजनीतिक अभ्यासको नाडी छाम्न सक्दछ । त्यसो भए विचारधारा असान्दर्भिक भएको यति प्रभावकारी दाबी किन भयो त ? किनकी यो मान्यता नवउदारवादी सम्भ्रान्तहरुका लागि उपयोगी थियोे । यसले समकालीन विश्व पुँजीवादी प्रणालीको विघटनमाथि ढाकछोप, मौलिकीकरण र अऐतिहासिकीकरणको प्रक्रियामा मद्दत गर्दथ्यो । तर, नवउदारवाद विरोधीहरु सुसंगत वैचारिक प्रतिरोधीको प्रवृत्तिबाट विमुख थिए । उनीहरु वर्तमान आर्थिक प्रणालीको व्यवस्थित विश्लेषण गर्नुको साटो यसलाई व्यक्तिगत लोभ र नैतिक समस्याका रुपमा चित्रण र निन्दा गर्न नै ढुक्क थिए । फलस्वरुप त्यस्ता विरोध, विद्रोह, दंगा र जनप्रदर्शनबाट उत्पन्न परिवेशभित्र वास्तविक प्रणालीगत विकल्प स्थापित गर्नुको साटो व्यक्तिगत अनुभवकेन्द्रित अभियन्तावादको अभ्यास बढ्यो ।
वैचारिक कामलाई वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अझै छ । यसले नवउदारवादको प्रतिरोधलाई गोलमटोल मात्र गर्दैन, बरु वैकल्पिक उपायको अभावमा स्वयं उसैलाई ठाउँ दिन्छ । नवउदारवादको विरुद्धमा सम्भाव्य प्रतिवर्चश्व आन्दोलन निर्माण गर्न चाहने अभियन्ता तथा बुद्धिजीवीहरुले विचारधाराको प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन शुरुवात गर्नु पर्दछ ।
तर, नवउदारवादविरोधी राजनीतिका अनेक असमरुप तथा अतिवादी धारहरुबीच यस कार्यका लागि कुन प्रकारको विचारधारा अनुकुल र प्रभावकारी हुन्छ ? यो ठहर गर्न सजिलो छैन । एक्काइसौं शताब्दीका प्रगतिशीलहरुले कुन विचारधारा अंगाल्नु पर्छ त ? प्रायः एउटा सामान्य मापदण्डको चर्चा हुने गर्छ- हामीले विविधतावाद वा विविधताकाबीचमा एकताको सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।
विचारधाराका क्षेत्रमा ‘विविधतामा एकता’ एक घिसेपिटे नारा मात्र हो जसले अभियन्तावादको विविध रुपलाई समष्टिगत रुपमा समेट्दछ । विविधतावाद विभिन्न विचारधारात्मक सन्दर्भलाई एउटै वृहत् आन्दोलनमा ल्याउने कडी हुन सक्दछ । यसले समकालीन बहसलाई चौतर्फी रुपमा घुमाउन सक्दछ । अझ मुख्य कुरा यसले परम्परागत वर्गकेन्द्रित सोचको ठाउँमा पहिचानको राजनीतिलाई एक गतिशील अन्तक्रिर्याको विषय बनाउँछ । त्यस्तै समकालीन विश्वका पश्चिमा विचारलाई गैर–पश्चिमा विचारहरुसँग तर्कसंगति र कार्यप्रणालीमा आधारमा समायोजित गर्न सक्नु पर्दछ ताकी नवउदारवाद विरुद्धको संघर्षलाई एक विश्वदृष्टिकोणका रुपमा विकसित गर्न सकियोस् ।
विश्वभरका नवउदारवादविरोधी आन्दोलनहरु एक ठाउँमा आउनु निश्चय नै राम्रो हो । तर यो काम अझैपनि राम्ररी भएको छैन । अझै पनि समाजवादी र अराजकतावादीबीच गहीरो विभाजन बाँकी छ । जुन स्तरमा उनीहरु भिन्न छन, त्यो स्तरको वैचारिक भिन्नता भने उनीहरुमा छैन । यी दुई विचारधाराको उत्पत्ति र सम्मिलन (ओभरल्याप) बारे अभियन्ताहरुको अवधारणा अझै अस्पष्ट छ ।
नवउदारवाद विरुद्ध वैचारिक प्रतिवर्चश्व निर्माण गर्न आधुनिक वैचारिकताका विभिन्न पक्षबीच समन्वयको एक सुसंगत प्रणाली बन्नै पर्छ । वर्तमानको निर्ममतासँग लड्ने इच्छाशक्तिभन्दा विगतका पूर्वाग्रहहरु अझै बलशाली छन् । विगत दुई शताब्दीका उनीहरुका पूर्ववर्ती वैचारिक अग्रजहरुले सामना गरेको स्थिति र अहिलेका अभियन्ताहरुले सामना गरिरहेको स्थिति फरक हो कि एउटै हो भनेर विवेकपूर्ण विमर्श गर्ने हो भने हाम्रा निष्कर्षहरु धेरै फरक बन्न सक्दछन् । जस्तो कि मार्क ट्वेनले भनेका थिए– ‘इतिहास कहिल्यै दोहोरिन सक्दैन तर यसलाई बारम्बार दोहोर्‍याइने गरिन्छ।’ आजका प्रगतिशीलहरुले यो चक्रलाई दोहोर्‍याउनुभन्दा इतिहासबाट शिक्षा लिनु उचित हो ।
विविधतावादको दोस्रो आयाम पहिचान–केन्द्रित सरोकारहरु हुन् । यहाँनेर यो प्रश्न उठ्छ कि यो आयामलाई हामी पुनर्ताजगी गर्दछौं वा त्यसै दबिन दिन्छौं । पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदा नश्ल, क्षेत्र, लिङ्गजस्ता नवउदारवाद विरोधी प्रतिरोध अगाडि आउँछन् र तिनीहरुको संयुक्त मोर्चा बनाउन सकिन्छ । अर्कोतिर यो पनि सोच्नु पर्दछ कि यदि पहिचानलाई एकांकी र अचुक उपायका रुपमा बुझियो भने त्यो प्रगतिशील राजनीतिका रुपमा चित्रित भइरहन सक्दैन । यसको सरल अर्थ प्रगतिशील राजनीतिले पहिचानका सरोकारहरुलाई प्रतिवर्चश्वको आन्दोलनको उद्देश्यसँग जोड्नु पर्दछ ।
अर्थात् नवउदारवाद विरोधी राजनीतिले तीन धारे रणनीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एक– पुराना स्थापित वैचारिक विविधताहरुको युगानुकुल समायोजन । दुई– पहिचानमा आधारित राजनीतिको विविधताबीच मोर्चाबन्दी । तीन–पश्चिमा र गैरपश्चिमा साँस्कृतिक वैचारिकतामाथि एक वैश्विक किल्लाबन्दी । समग्रमा बहुलतावाद कुनै केन्द्रशक्तिको सम्प्रशारक नभएर सामूहिक सवालको साझा शक्तिकेन्द्र हुनुपर्दछ ।
त्यसो भए अब यो प्रश्न उठ्छ कि नवउदावाद विरुद्ध यी विविध पक्षहरुलाई के ले नजिक ल्याउन सक्छ ? यसका पनि तीन तत्व छन् । पहिलो– नवउदारवाद विरोधी आन्दोलनका व्यवधानहरु पहिचान र सामना गर्ने क्रान्तिकारी राजनीतिको इच्छाशक्ति । नवउदारवादी वर्चश्व भनेको के हो ? यसको संचरना कसरी बनेको छ ? यसका कमजोर विन्दुहरु कुन-कुन हुन् ? यसका संस्थागत सामर्थ्य के-के हुन् ? यी सबै पक्षको गहीरो विश्लेषण र त्यसको विकल्पमा एक नैतिक साहससहितको अभियान प्रगतिशीलहरुले संगठित गर्नुपर्छ ।
दोस्रो– नवउदारवादबाट संक्रमण र नयाँ प्रणाली, नयाँ समाज निर्माणको दूरदृष्टि प्रष्ट गर्न सक्नु पर्दछ । केवल रुढ सिद्धान्तहरु प्रस्तुत गरेर मात्र हुँदैन । नवउदारवादले दिइरहेका सुविधाहरुभन्दा राम्रो अवसर नयाँ प्रणालीले दिन सक्दछ भन्ने प्रष्टता हुनु पर्दछ ।
अन्तिम कुरा– यहाँबाट त्यहाँ कसरी पुग्ने ? यी कार्यहरु गर्ने रणनीति के हो ? कुन विधि, प्रक्रिया र मोडालिटीबाट ती कार्य सम्भव हुनेछन् भन्ने प्रष्ट हुनु पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा थुप्रै विकल्पहरु हुन्छन् । ती मध्ये उपयुक्त विकल्प छनौट र कार्यान्वयन हुन सक्नु पर्दछ ।
संक्षेपमा– अहिलेको आवश्यकता भनेको विद्यमान विश्वव्यवस्थाका दमन र प्रणालीगत निरीहता विरुद्ध एक वृहत् पुनर्भाष्य र स्थिर दार्शनिक दृष्टिकोण हो । तर नवउदारवाद विरोधी खेमामा देखिएको अवैचारिक सोचले उनीहरुलाई विश्व पुँजीवादविरुद्धको संघर्षमा फितलो बनाएको छ । जति छिटो आजका प्रगतिशीलहरुले यो समस्यालाई बुझ्दछन् र नवउदारवाद विरुद्धको वैचारिक धारलाई तिखो पार्दछन्, त्यति नै उनीहरुले नवउदारवादमाथि विजय प्राप्त गर्ने सम्भावना बढ्ने छ ।
(प्रस्तुत लेख लेखकको किताब आइडोलजी एण्ड फयूचर अफ प्रोगेसिभ सोसियल मुभमेन्टबाट साझापोस्टले गरेको अनुवादको अंश हो)